Bangladesh: Lasa Renivohi-kolontsaina Islamika i Dhaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2012 4:05 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, عربي, Français, bahasa Indonesia, русский, বাংলা
Notokanana ho renivohi-kolontsaina Islamika ny renivohitr'i Bangladesh, Dhaka, miaraka amin'ireo tanàn-dehibe anankiroa hafa. Ny Fikambanana Islamika momba ny Fampianarana, ny Siantifika ary ny Kolontsaina (ISESCO), sy ny departemanta fanampiny an'ny Fikambanana Konferansa Islamika (OIC), no nanambara izany vao haingana. Hatramin'ny taona 2004, efa nodinihan'ny ISESCO izany fandaharan'asa isan-taona izany mba hanajana ny politika Islamika, ny tantara, ny sivilizasiona sy ny lova ara-kolontsaina ao amin'ny firenena mpikambana. Tamin'ny taona 2012, nanjary renivohitry ny firenena Azia i Dhaka.
Taoriana ny fahatongavan'ny Islamo tao amin'ny kontinanta kely Indiana, nalaina avy tamin'ny haibikan'ny tranobe Islamika ny maritrano ao an-toerana. Mampiseho izany ireo moskea marobe (Masjids) naorina ao Dhaka. Natsangana nandritra ny vanim-potoana Sultan ny sasany tamin'ireo toeram-pivavahana ireo, ny sasany kosa nandritra ny vanim-potoana Mughal ary ny hafa sasany tamin'ny andron'ny Britanika. Misy ihany koa ireo maritrano maoderina marobe izay nalaina avy amin'ny haikanto sy haibika Islamika ny ankamaroan'izany.
Hatramin'ny vanim-potoana Sultan, teo am-piorenana ny Masjids ny tao Dhaka. Natomboka tamin'ny fiafaran'ny moské an'i Binot Bibi ny taona 1457 AD ny fanorenana. Nantsoina ho toera-pivavahana voalohany ho an'ny Miosolmana ao Dhaka izany. Bilaogera Juthochari nampahafantatra fa nirodana ny trano tamin'ny taona 2006. Nitranga nandritra ny vanim-potoana Mughal ny tanjona lehibe amin'ny fananganana moské. Nomena anarana renivohitry Subeh Bengal i Dhaka. Naorina tsitokatokana ny moské mahafinaritra ahitana haibika Islamika. Zava-dehibe ho an'i Dhaka tokoa izany fotoana izany mba hampandroso azy amin'ny maha-renivohitra azy.
Fantatra amin'ny maha tanàn-dehiben'ny Moskea ihany koa i Dhaka. Saingy maro tamin'ireo tranobe mitondra ny riba sy kolontsaina Islamika no tsy nomena hasiny ary natao tsinotsinona ny fikarakarana na ny fanavaozana azy. Efa simba tanteraka ankehitriny ny sasany amin'izy ireo. Taminà lahatsoratra malaza nosoratan'i Ahmed Firoz, nasongadiny tamin'izany ny endrik'ireo tranobe anankiroa ankehitriny – Boror Katara & Choto Katara. Nanomboka ny taona 1643 hatramin'ny taona 1646 no nanamboarana ny moskea Bara Katara izay mitovy ny maritrano Mughal. Navaozina ny rafitra tamin'izany moskea izany, ka nalàna taminy ny sasany tamin'ireo firafitra, izay nanimba ny haingo mahafinaritra nipetaka taminy. Azonao jerena ny marika famantarana eny amin'ireo magazay vaovao, tranom-barotra sns anatin'ny rafitra. Marobe tamin'ireo trano lehibe no nasaratsakaraka ho efi-trano kelikely. Eo andalam-pahasimbana koa ny choto Katara, izay naorina nandritra andron'ny Shaesta Khan (1664).
Bilaogera Hompgro nandefa sary bilaogy tamin'ny faha-400 taonan'ny tanan-dehibe Dhaka, nisongadina tamin'izany sary izany ireo moské taloha maromaro. Iray amin'ireo sary ny Moskea Musa Khan naorina tamin'ny taona 1679. Iray hafa kosa ny Moskea Hazi Shahbaz izay naorina tamin'ny taona 1679. Ary ny Moskea Hazi Beg kosa tamin'ny taona 1683. Eo andalam-paharavana ihany koa ireo moské ireo.
Bilaogera Razib kosa naka ny sarin'ireo moskea maromaro mba hatsofoka ao amin'ny Wikipedia. Nalahelo mafy noho ny fahasimban'ireo moské taloha marobe ao Dhaka izy: